कसरी iCloud keychain आईओएस7को साथ बचत आफ्नो पासवर्डहरू आईफोन समाचार
कसरी iCloud कीचेन मा आफ्नो बचत पासवर्डहरू आईओएस7को साथ
आईओएस update अपडेटले हामीलाई एक धेरै उपयोगी समाधान, आईक्लाउड किचेन दिएको छ। यो आश्चर्यले हामीलाई अनुमति दिन्छ केन्द्रीकृत पासवर्ड, बलियो पासवर्ड उत्पन्न गर्नुहोस् र स्वत: भरण भुक्तान क्षेत्रहरू तपाइँको बैंक कार्ड विवरण भण्डारण गर्दा।
यो डाटा iCloud मा भण्डारण भइरहेको बारे मा तपाईं एक अपवाद हुन सक्छ, तर तिनीहरू नेटवर्क मा छन् र कम्तिमा एप्पलले २256-बिट AES ईन्क्रिप्शन प्रयोग गर्दछ, जो सैन्य ग्रेड हो।
1 यदि तपाईंसँग यो कन्फिगर गरिएको छैन भने
2 आईओएस from बाट एक किचेन पासवर्ड हेर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग यो कन्फिगर गरिएको छैन भने
आईओएस .7.0.3.०..XNUMX वा पछिल्लो अद्यावधिक पछि, आईओएस सेटअप विजार्डले सोध्नेछ यदि तपाईं आईक्लाउड कीचेन सक्रिय गर्न चाहानुहुन्छ भने। यदि तपाईंले यो चरण छोड्नु भएको छ र यसलाई अहिले कन्फिगर गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले यी चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्दछ:
Para आईओएस १ or वा पछि:
सेटिंग्स> iCloud मा जानुहोस् र किचेन खोल्नुहोस्।
सेटअप पूरा गर्न पर्दामा निर्देशनहरूको पालना गर्नुहोस्।
Para OS X v10.9 वा पछि Mavericks:
एप्पल ()> प्रणाली प्राथमिकताहरू> आईक्लाउड चयन गर्नुहोस्।
किचेन चयन गर्नुहोस्।
वैकल्पिक रूपमा तपाईं निदाएको पछाडि वा स्क्रिनसेभर सुरू गरे पछि स्क्रिन अनलक गर्न पासवर्ड सेट गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईंको एप्पल आईडी र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
आईओएस from बाट एक किचेन पासवर्ड हेर्नुहोस्
तपाईले हामी जस्तो प्रयोग गर्नु भएको हुनसक्छ, पासवर्डले भण्डारण गर्यो र कार्यक्रमले याद गर्यो र तपाईलाई समस्यामा पर्न सक्छ जब तपाई पासवर्ड-संरक्षित पृष्ठ (प्रोफाइल, बैंक पृष्ठ, इन्ट्रानेटमा पहुँच, इत्यादि) मा परामर्श लिन चाहानुहुन्छ। ) अन्य उपकरणबाट र पासवर्ड याद छैन, यदि केहि समयमा तपाईंले यो सिक्नु भयो।
यी साधारण चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् र तपाईं त्यो पासवर्ड जाँच गर्न सक्नुहुन्छ:
सेटिंग्स> सफारी> सामान्य> पासवर्ड र अटोफिल> बचत गरिएका पासवर्डहरू खोल्नुहोस्
तपाईंको पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस् (पूर्वनिर्धारित रूपमा यो टर्मिनल अनलक गर्न को लागी एक हो)
लगइनहरूको सूची देखा पर्दछ, तपाईंको रुचिमा क्लिक गर्नुहोस्
अब तपाईं त्यो विशिष्ट लग इनको लागि प्रमाणहरू देख्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईओएस » iOS7» कसरी iCloud कीचेन मा आफ्नो बचत पासवर्डहरू आईओएस7को साथ
त्यसोभए म मेरो ईन्क्रिप्शनको साथ क्लाउडमा मेरा कार्ड पासवर्डहरू बचत गर्न सक्दछु, तर यदि कसैले मेरो फोन पहुँच गर्दछ भने उनीहरूसँग पहुँच छ। ए तेसो पो?
म यो सोध्छु किनकि यदि त्यहाँ मोबाइल मा एक ट्रोजन छ, यो पनि यसलाई पहुँच गर्न सक्दछ, सही?
अनिर्णितलाई जवाफ दिनुहोस्
एक iPhone मा ट्रोजन? त्यो आईओएस मित्रमा कहिल्यै देखिएको छैन। याद गर्नुहोस् कि आईओएस एक सेरेटेड प्रणाली हो, जबसम्म तपाई जेलब्रेक नगर्नुहोस् र पाइरेटेड अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्नुहुन्न, सबै ठीक हुन्छ।
जहाँ मसँग मेरो शंका छ भने माभेरिक्समा छ किनकि यो आईओएस जस्तो सेरट गरिएको छैन र तपाईंलाई इन्टरनेटबाट क्र्याक अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न अनुमति दिन्छ। माभेरिक्समा ह्याकरहरू आक्रमण गर्नमा धेरै चासो लिन सक्दछन्, किनकि उनीहरूलाई थाँहा छ कि केहि प्रयोगकर्ताहरूसँग पहिले नै क्रेडिट कार्ड विवरणहरू हुन सक्छन्। हुनसक्छ आईक्लाउडमा यो ईन्क्रिप्ट गरिएको छ, तर इन्टरनेट पृष्ठहरूमा जहाँ तपाइँले नम्बरहरू तिर्नुहुन्छ ताराहरूसँग देखा पर्दैन। सावधान रहनुहोस्, सफारी, मोजिला, क्रोम र कुनै पनि अन्य ब्राउजर जसले सफा पासवर्ड र कुनै पनि अन्य डाटा प्रयोग गर्दछ। मलाई थाहा छ धेरैले ईमेल खाता प्रविष्टि गरीरहेको देखेका छुलेरिया जस्ता धेरै पहिले नै खुला छ, वा फेसबुक वा पासवर्ड बिना केहि खोलिएको छ। तर सबै भन्दा सल्लाह दिईएको कुरा भनेको डेटा वा ट्रेस सफा गर्नु जुन हामीले हाम्रो ब्राउजरहरूमा छोड्छौं। 😄
जवाफ दिनु भएकोमा धन्यवाद। जे भए पनि, म यसलाई विश्वास गर्दिन। यो फोन हो। कम्पनी र मैले एयरवाच स्थापना गरेको छु, मेरो लागि यो लगभग ट्रोजन is हो
महत्त्वपूर्ण पासवर्डहरू सम्झन राम्रो हुन्छ।
Settings सेटिंग्स> iCloud मा जानुहोस् र किचेनलाई टर्न गर्नुहोस्-।- यो किचेन सक्रिय पार्नेछ
सुधारका लागि धन्यबाद, यो पहिले नै अप टु डेटमा छ।
म मेरो पीसीमा आइक्लोउडमा मेरो संगीत कसरी डाउनलोड गर्न सक्छु?
HC लाई जवाफ दिनुहोस्
कसरी म मेरो आईप्याड प्रविष्ट गर्न मेरो कोड थाहा पाउन सक्छु
Amy लाई जवाफ दिनुहोस्
म कसरी आइफोन phone फोन पुनःस्टार्ट गर्न सक्छु यदि म आइक्लोउड छैन र आईफोन खोज्छु भने
आईफोनबाट कार्डबाट चार्ज गर्नुहोस्
स्पेस खरानी आईफोन ss को सबैभन्दा लोकप्रिय रंग हो